आचार्य बालकृष्णलाई विष खुवाउने आफ्नै पूर्वकर्मचारी ! | Kendrabindu Nepal Online News
आचार्य बालकृष्णलाई विष खुवाउने आफ्नै पूर्वकर्मचारी !
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार ०६:५४
आचार्य बालकृष्णलाई उहाँ निकटकै पूर्वकर्मचारीले पेडामा विष मिसाएर खुवाएको तथ्य फेला परेको छ । केही वर्षसम्म पतञ्जली योगपीठको मुख्यालयमा कार्यरत अग्रवाल थरका पूर्वकर्मचारीले कृष्ण जन्माटमीको दिन पेडामा विष खुवाएर हत्या प्रयास गरेको खुलेको हो ।
कृष्ण जन्माष्टमीको दिन गुरुको हैसियतले एक पाकेट पेडा लिएर हरिद्वारस्थित निवासमा आएका ती कर्मचारीले धेरै पेडामध्ये आफ्नै हातले विष मिसाएको पेडा खान दिएको खुलेको छ । आचार्य बालकृष्णलाई हरिद्वारमा भेट गरी नेपाल फर्किनु भएका पतञ्जली योगपीठ नेपालका ट्रस्टी ई. शालिकराम सिंहले पेडामा विष खुवाउने पूर्वकर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
पेडामा विष मिसाएर खुवाएको करिब ५ मिनेटपछि छटपटिनु भएका आचार्य बालकृष्णलाई बाबा रामदेव र कर्मचारीले नजिकैको भूमानन्द अस्पतालमा भर्ना गरेका थिए । उक्त अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि ऋषिकेशस्थित एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । करिब दुई दिनसम्म उपचार गरी निवास फर्किनु भएका आचार्य बालकृष्णको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
अस्पताल भर्ना भएपछि भारतभर आचार्यको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उच्चतहका राजनीतिक नेता उहाँको निवास आउने गरेका छन् । मन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहका नेता उहाँलाई भेट गर्न हरिद्वार पुगेका थिए ।
भदौ १८ मा नेपाल आउँदै
यसैविच हत्या प्रयासबाट जोगिनु भएका आचार्य बालकृष्ण यही सेप्टेम्बर ४ तारिख अर्थात् भदौ १८ गते नेपाल आउनुहुने भएको छ । भारत अलावा नेपालमा समेत स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा गम्भीर चिन्ता हुन थालेपछि उहाँ नेपाल आउन लाग्नु भएको हो।
आचार्य बालकृष्णलाई, आफ्नै पूर्वकर्मचारी !, विष खुवाउने
Prevदर खान गएका बनेपाका महिला कानुन पढेर फर्किए
स्पष्ट व्याख्या र कार्यविधि नहुँदा आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन अपूर्णNext